Izinkondlo zezingane kanye nemilolotelo ngo-Mashi 8 ngomama, kumkhulu
Izinkondlo izingane ukuhalalisela omama bakho abathandekayo ngoMashi 8.
Ngokushesha ngo-Mashi 8, okusho ukuthi ezinkulisa ziqala ekuseni ukuzinikela kwiSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke. Othisha nabazali balungiselela kusengaphambili iholidi, beza nezikripthi, imincintiswano, izinkondlo nokuhalalisela. Wonke umntwana ufuna ukuhalalisela othisha bakhe abathandekayo, omama nogogo ngoMashi 8, ngakho ufundisa imilolotelo. Njengoba izingane zingenamandla kakhulu, kungcono ukhethe imilolotelo emifushane yeholidi, okuyinto noma yimuphi ingane ezokwazi ukuyikhuluma.
Khetha ingane embalwa amavesi alula futhi ayikhunjulwayo, makakhethe ukuhalalisela ukuthi uyayithanda futhi amangaze izivakashi e-matinee ezinikezelwe uSuku Lwabesifazane Lwamanye amazwe! Uma ingane yakho ikhulile ngokwanele, ungakhetha ivesi elide futhi lilukhuni kuye. Izinkondlo ngo-Mashi 8 enkulisa izoba isipho esihle kakhulu esimenywe emkhosini womama, udade, ugogo. Isivakashi ngasinye nabafundisi bazojabula ukuvuma ukubonga okukhulunywe yizingane!
Izinkondlo ezincane zezingane
Izinkondlo ezimfushane ze-enkulisa
Angizange ngikhale usuku lonke,
Awuzange uhudule izinyane,
Namuhla iholidi lomama wami.
Ngenze isipho ngokwami
Kusuka ephepheni elinamapende.
Amathoni amasha ku-pigtails
Yebo, i-patty esiphundu
Ukuqhakaza ngisho nesitshalo
Kuleliholidi - Usuku lwabesifazane!
Kusukela ngoMashi 8 ngihalalisela
Futhi ngiyakwanga futhi ngikuthande!
Futhi njengenkumbulo evela endodaneni yami
Vumela umlolozo uhlale!
Ngo-8 kuMashi ngiyahalalisela
Omakhelwane, ugogo nomama,
Futhi ngisho no-Murka ikati lethu -
Ngizobabhidliza futhi nginike zona kusukela engadini
Ngizothatha futhi ngenze ikhekhe:
Lapha epulasitiki, futhi lapha - i-cottage shizi.
Kuthiwani ngesandla i-thong?
Kuyinto nje inkondlo yami.
Ngo-Mashi kukhona usuku olunjalo
Ngubani phakathi kwenu owaziyo,
Isibalo esisho lokho?
Izingane ziyothi kithi ngokubambisana:
- Leli holide lamamawethu!
Ngo-8 kuMashi, iholidi lamama,
Tuk-tuk! - knocking emnyango kithi.
Uza nje kule ndlu,
Lapho basiza umama.
Sizodilizela phansi umama,
Sizohlabelela naye, sizodansa.
Siyipendezela isithombe sakhe
"Awukwazi ukuqashelwa!" Nangu kunjalo! -
Khona-ke umama uzotshela abantu.
Futhi thina njalo,
Sizohlala sinjalo njalo!
Usuku lwabesifazane alukude,
Hlala endlini nathi
Umama, ugogo, udadewabo.
Hlala nobaba ngaphambi kokusa,
Ngakho ukuthi ekuseni
Letha izimbali zekhaya
Kepha siyakubeka umkhosi entabeni,
Lolu suku lugubha ndawonye
Unina, ugogo, udadewethu!
Kusukela ekuseni, wena, ugogo, umatasa,
Njalo ngazo zonke izindlela zisisiza sifune
Uzohlala ududuza futhi uqonde,
Futhi izwi lihleka kahle.
Sifisa ugogo impilo,
Vumela ukhathele kancane.
Kuzobekwa uphawu ngothando
Futhi kulolu suku nonyaka wonke!
Akusekho okuhle kakhulu emhlabeni,
Iholide lentwasahlobo nelanga,
I-ray elula efasiteleni,
Ikhanyiswe ngoMashi 8
Futhi njengomngane wethu omkhulu,
I-dolce enhle enelanga
Hastens ukuhalalisela izingane
Bonke omama, othisha kanye kakhulu
Sifisela wena injabulo, okuhle,
Smile, injabulo, ukubekezela.
Ngo-Mashi 8 usuku lwesifazane!
Yamukela lezi zihalaliso,
Asinamavila kakhulu ukukudumisa.
Futhi zizungezwe ukunakekelwa.
Vumela wonke indodana ethandekayo
Ufunda ukuthokoza okunjalo.
Happy 8 Mashi!
Kule hora elikhanyayo!
Ngo ntambama ka-Mashi 8
Ngokudonsa kokuqala, ne-blizzard yokugcina,
With iholide entwasahlobo
Siyakuhalalisela, ufisa ngobuqotho
Injabulo, injabulo, impilo, uthando!
Imilolotelo yomculo ngoMashi 8
Umama sathunga i-napkin,
Isibalo esithi "ayisishiyagalombili" sihlotshisiwe,
Inyoni ehlotshiswe egatsheni:
Kusasa sihalalisela uMama.
Umama ngoMashi ka-8
Sinikeza i-twig ye-mimosa.
Lolu suku luzofika kusasa,
Ngisho vumela iqhwa liqhekeke.
Uma ilanga ngaphandle kwefasitela,
Futhi iqhwa lingaphansi -
Ngakho, futhi ngosuku lwowesifazane
Umama uhalalisela unina,
Wonke umuntu ufunda kuye ekuseni
Isipho sami kumama
Konke kusihlwa I
Ngingomhlaka lwesishiyagalombili ka-Mashi
Dweba umama ngezimbali zeholide.
Okokuqala - kusuka ku-violets,
Emapulasinzini amaflower owesibili,
I-bouquet of blossoms
Yile ndlela ihlakaniphile ngayo
Lena yeholide lomama wami
Le ngoma igobe,
Sithwala namuhla endlini,
Sinikeza abakwa-grannies nabomama,
Siyakuhalalisela ngoSuku Lwabesifazane!
Usuku Lokusasa Ngo-Mashi 8,
Kuyinto iholide yamaMoms!
Jabulela isipho sikaMama
Kusukela endodaneni yakhe,
Uyothi kimi: "Ngiyabonga!"
Konke engiya khona, ngicabanga, ngibheka:
"Ngizoyinikela umama kusasa?
Mhlawumbe udonsa? Mhlawumbe uswidi?
Cha! Nangu wena, othandekayo, ngosuku lwakho
I-scarlet flower - ukukhanya! "
Kungani Okwesishiyagalombili Ntambama
Ingabe ilanga likhanya ngokukhanyayo?
Ngoba omama bethu
Kungcono kunanoma ubani emhlabeni!
Ngenxa yokuthi iholide lomama -
Usuku olungcono kakhulu!
Iholide yabo bonke abantu!
Othandekayo omama bethu,
Memezela ngaphandle kokuhlobisa,
Ukuthi iholidi lakho liyilo, kakhulu,
Injabulo kunazo zonke kithi!
Ezempilo, ilanga nokuhle,
Futhi ukuthula, injabulo kuze kube phakade,
Uthando, ithemba nokuchuma,
Futhi ukuthi konke okukhona ekuphileni kuyabushelela.
Sizoshiya namuhla kusukela ejwayelekile,
Izimbali azikwazanga ukufika noma kuphi,
Ngosuku lwentwasahlobo ngoMashi 8,
Njengesipho kwabesifazane imilolozelo.
Usuku lwesishiyagalolunye lwangoSuku lwabesifazane
Siyakuhalalisela ngocansi obuthakathaka.
Banikezwa imimoya, imibhangqwana kanye namaswidi,
Kodwa okubaluleke kakhulu, izimbali ziyi-bouquets.
Umama udweba ulwandle lwezimbali zami,
Futhi ngizomtshela izinkondlo eziningi.
Mama, ungumuntu othandekayo kakhulu,
Ngifuna ukuba ube mnandi kakhulu.
Ngomhlaka lwesishiyagalombili ka-March nginihalalisela.
Amaphesenti ayikhulu owanikeza wona,
Kusukela ku-flowerbed uthola imbali,
Kodwa ukumomotheka -
Utshele le nkondlo!
Ngo-8 Mashi yiholide elihle kakhulu
Namuhla angisona i-prankster
Futhi wonke umuntu emhlabeni ujabula kakhulu.
Izimbali zihamba kakhulu ngisemgodini
Ekuseni ngikubeka ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Futhi wagijimela ikhadi lekhadi ngokushesha
Ugogo, ngiyakumbamba umama,
Ngifisa wena ngenhliziyo yami yonke
Ezempilo, injabulo nothando!
Ngomhlaka wesishiyagalombili ka-Mashi usuku lwamawesifazane.
Izipho azibuvi kimi.
Futhi ngizothatha ipensela yami,
Futhi ngizobhala ukuthi umkhosi wakho uwukuthi:
Okuhle kakhulu emhlabeni!
Vumela wonke umuntu avumelane nalokhu.
Ngiyanihalalisela nonke ngokushesha kwami,
Futhi yilokhu engizokutshela khona:
"Namuhla ilanga nenyanga,
Ngikunika nje ...
Kodwa bangaphandle kwami
Ngiyakujabulisa ngokugcwele wena ...
Khona-ke njengethula umngane wami
Yamukela imvumelwano yami enesizotha!
Inhle kunazo zonke namuhla omama bethu,
Wonke umuntu unjengelanga ngenxa yezingane zabo.
Siyakunanga ngokufudumele, siyakwamukela ngisho nakakhulu,
Emva kwakho konke, eduze komama omuhle konke kukhanya.
Ugogo nomalume, odade namantombazane,
Namuhla abafana abancane bayamhalalisela.
Abantu abadala nezingane bayazi.
Ngubani lo? Ungitshele.
Nakuba ugoqa ngeso elincane.
Yeka ukuthi ungazi kanjani? Ngempela, lo mama!
Iholide elijabulisayo, othandekayo.
Yiba nempilo futhi ujabule,
Njalo osemncane, enhle.
Usuku lomama, usuku lomama!
Gqoka kahle kakhulu.
Vuka ekuseni kakhulu.
Ngaphakathi endlini, hlambulule.
Nika umama wakho.
Amasokisi afudumele afudumele.
Uyayazi izinkondlo nezinkondlo.
Ngimnika ikhadi leposi!
Yeka ukukhanya okungakanani endlini!
Yeka ukuthi ubuhle kangakanani!
Izimbali zikhanya phezu kwetafula lomama.
Ngakho ngithanda umama -
Angikwazi ukuthola amagama!
Esihlalweni ngihlala phansi
Vumela uMashi wami wesi-8
Uhlala unyaka wonke!
Siyakuhalalisela ozakwabo ngoMashi 8
Ukudweba kwezingane ngo-Mashi 8 kumama nogogo - emncintiswaneni esikoleni nasenkulisa - isigaba-ngesigaba esidweba ipensela, amapende - Ukudweba okuhle ngo-Mashi 8 ngezandla zami isinyathelo ngesinyathelo
Izifiso ezinhle ngoMashi 8, umama, udade, ugogo, intombi, othisha, osebenza nabo besifazane - Siyakuhalalisela nge-SMS, ivesi ne-prose
Izithombe ezinhle namakhadi aphethe i-Easter kaKristu 2018 ngemibingelelo nezifiso
Izinkinobho ze-crochet nge incazelo yesinyathelo nesinyathelo nemidwebo
Isifo segciwane: izimbangela, izimpawu, ukuvimbela
I-Carbon monoxide poisoning
Amalungelo kanye nemisebenzi yabangane abakhulu
Ukuvuselelwa komzimba: zokupheka zemvelo zobuhle bemvelo
Ukubheka futhi kumemezela: indlela yokudala isithombe somlingo we-Halloween
Ingaphakathi ekamelweni lengane lomntwana osanda kuzalwa
Amakhukhi ahlanzekile ku-brine
Inkukhu shish kebab in the microwave